Somaliska - Macluumaad ku saabsan waxbarashada dhistansiga ee folkhögskolan. - VGR Folkhögskolor
Menyalternativ under Deltagare
Menyalternativ under Konferens
Projekt & Uppdragskurser
Menyalternativ under Projekt & Uppdragskurser
Information angående Corona (Covid-19)
Menyalternativ under Information angående Corona (Covid-19)
Arabiska - معلومات عن انتقال المدرسة الثانوية الشعبية إلى التعليم عن بعد.
Persiska - اطلاعیه در مورد تغییر روش آموزشبه تحصیل از راه دور در مدارس مردمی (Folkhögskolor) زمینه‌ها و دلایل
Somaliska - Macluumaad ku saabsan waxbarashada dhistansiga ee folkhögskolan.
Vad gör folkhögskoleförvaltningen nu?
Information till personal
Information till deltagare angående Coronavirus (Covid-19)
Svenska för vårdpersonal
Macluumaad ku saabsan waxbarashada dhistansiga ee folkhögskolan.
xanuunka Coronavirus ee sida aadka ah ugu dhex faafaya bulshada aawgiis ayaan waxaan isbedelo ku samaynay hab waxbarasheedkeenii hore ee folkhögskola. U jeedada aan u samaynay isbedeladaan ayaa ah inaan joojino ama ka hortagno faafitaanka cudurka.
Maamulka sare ee iskoolku waxa uu raacayaa tacliimaadka ay dawlada iyo qolyaha caafimaadka sare ay siiyeen.
Maalinti talaadada ee taariikhdu ahayd 17 bisha maarso waxa uu raysal wasaaraha sweden soo jeediyay in dhamaan la xiro iskoolada waxbarashada dadka waawayn iyadoo taas badalkeeda laga dhigayo in distans ama onlayn loo badalo waxbarashada laga bilaabo 18 maarso. Maamulka iskoolku waxa uu raacayaa tacliimaadkaas raysal wasaaruhu soo jeediyay.
Laga bilaabo 18 maarso 2020 waxaa loo wareejiyay casharada in lagu qaato onlayn ama distans taas oo ay ka simanyihiin dhamaan iskoolada.
Hadii aad wax su’aal ah ka qabtid sida ay wax u socdaan ama qaabkaan cusub ee loo badalay casharada waxaad kala xiiriri kartaa ama aad waydiin kartaa iskoolkaaga. Iskoolkastaa waxa uu masuul ka yahay sida ay u socon doonaan ama ay u soo diyaarin doonaan casharada.
Iskoolada laga amaahan karo qalab sida kombiyutar ama kaamera ama qalabkale oo ardayga u sahlaya waxbarashadiisa waxa ay diyaarinayaan foomki uu ardaygu wax ku amaahan lahaa. Iskoolkaga kala xiriir hadaad u baahantahay inaad qalabka waxbarashada amaahato.
Dhaqaalaha ardayga iyo natiijada waxbarashada
Ardayga natiijadiisa waxaa loo qiimaynayaa si lamida sidii loo qiimayn jiray markuu goobta iskoolka joogay. Hadii ardaygu uu waxbarashadiisa u guto si lamida sidii markuu iskoolka joogay waxay taasi u sahlaysaa inuu helo natiijadiisa.
Warbixinta aynu ka helnay CSN waxay cadaynaysa in ardaygu uu helayo lacagtii uu ku heli jiray waxbarashada hadii uu tixraaco waxbarashada onlaynka.
Xarunta iskoolka iyo hoyga ardayda ee iskoolka
Xarumaha iskoolku way xirnaanayaan ilaa inta waxbarashada lagu qaadanayo onlaynka. Hadii aad ku ilawday iskoolka alaab ama waxyaalo kale, kala xiriir iskoolka si aad usoo qaadato.
Kushiinka ama jikada iskoolku wuu xirnaanayaa ilaa inta iskoolku xiranyahay, wax cuno ahna ma iibin doonaan.
Ardayda dagan hoyga iskoolka ama internat ka waxaan kula talinaynaa in ay goob kale u guuraan oo ay ka guuraan hoyga iskoolka. Hadii aad u guurtid goobkale inta iskoolku xiranyahay waxbarashaduna onlaynka tahay, lagugu soo dalici maayo ama lagaa qaadi maayo lacagti hoyga iskoolka.
Hadii ardaygu uu waayo goob kale oo uu dago, waa uu sii degenaan karaa iskoolka hoygiisa. Haduu ardaygu go`aansado inuu sii degenaado hoyga iskoolka xiliga iskoolku xiranyahay, waxaa ka go`aysa lacagtii cunada.
Senast uppdaterad: 2020-03-23 13:15
Tobias T Johansson